Archive de l'auteur | NewsMada | Page 1082
Rugby : mpilalao matanjaka no mandrafitra ny Makis
Par Taratra sur 09/06/2016 NS Malagasy, NS-Sports
Vonona tanteraka ny Makis de Madagascar, hiatrika ny Can 2016. Efa fantatra avokoa ireo mpilalao hiatrika izany. Ao anatin’ny fifantohan-tsaina ankehitriny ny mpilalao rehetra. Ora sisa andrasana dia raikitra ny lalao. Nanomboka androany ny fampivondronana ireo mpilalao 25 mandrafitra ny Makis de Madagascar, hiatrika ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika (Can 1B), eo amin’ny taranja […]
Kitra – Cosafa Cup 2016 : mpilalao 20 ny mandrafitra ny Barea
Nanainga, ny talata lasa teo, ary nihazo an’i Windhoek, Namibia, ny Barea de Madagascar, hiatrika ny fiadiana ny ho tompondaka ho an’ny faritra tapany atsimon’i Afrika na ny “Cosafa cup 2016”. Fihaonana hatao ny 11 ka hatramin’ny 26 jona ho avy izao. Mpilalao 20 mirahalahy ihany no mandrafitra ny ekipam-pirenena malagasy, hifaninana amin’izany lalao izany, […]
Tabera Randriamanantsoa : « Tsy vahaolana io lalàn’ny fampihavanana io »
Par Taratra sur 09/06/2016 NS Malagasy, NS-Politique
Nahitsy tamin’ny fanehoan-keviny. « Tokony ho hita ao anatin’io volavolan-dalàna momba ny fampihavanana io ny fanorenana ifotony ny firenena. Tsy famotsoran-keloka fotsiny ihany koa ny fampihavanana. Tsy handeha io raha izao namolavolana azy izao», hoy ny mpitarika ny antoko Kintana, Tabera Randriamanantsoa, omaly tamin’ny haino aman-jery. Notanisainy ho anton’izany ny fanendrenan’ny filoham-pirenena olona enina eo anivon’ny […]
Pr Rakotonirina Solonjatovo : “Tsy misy intsony ny fifampitokisan’ny vahoaka sy ny mpitondra”
Mby aiza ny toe-draharaham-pirenena amin’izao fotoana izao? Maneho ny fijeriny ny mpikaroka sady filohan’ny Vovonana kristianina malagasy (VKM), Pr Rakotonirina Solonjatovo: “Tsy misy intsony ny fifampitokisana eo amin’ny vahoaka sy ny mpitondra.” Dinidinika… Gazety Taratra (*): Ny fijerinao ny toe-draharaham-pirenena amin’izao fotoana izao? Pr Rakotonirina Solonjatovo (-): Ny zavatra niseho farany, ireny fisavana ireny. Ny […]
Fivorian’ny parlemanta : 15 andro sisa ny fahazoana mandinika lalàna
Tonga amin’izay nokendreny ny governemanta? Na ny politika maloto amin’ny fandinihana sy fandaniana volavolan-dalàna eny anivon’ny Antenimiera roa tonta hatao totoafo sy alasafay… 15 andro sisa ny fe-potoan’ny parlemanta amin’izao fivoriana ara-potoana voalohany fandinihana sy fandaniana lalàna izao. Tsy nisy inona natao sy vita ny amin’izany tao anatin’izay iray volana sy tapany izay, nanomboka ny […]
Par Taratra sur 09/06/2016 Economie, NS Malagasy
Betsaka ny fanampiana ara-tsosialy omen’ny Tahirim-pirenena misahana ny fiahiana ara-tsosialy (Cnaps) ny mpiasa, saingy vitsy ireo misitraka izany, latsaky ny 10%. Araka izany, niantso ny tompon’andraikitry ny Sampandraharaha asa sosialy sy ny fahasalamana (Sass) ao amin’ny Cnaps ny mpitantana ny fiangonana advantista, hanofana ny tompon’andraikitra isan-tsokajiny ao amin’izy ireo. “Tanjon’ny fiangonana advantista ny hanaja ny […]
Par Taratra sur 09/06/2016 En Bref, NS Malagasy
Hanangana rafitra iraisana hisahana ny fifidianana ireo firenena aty amin’ny ranomasimbe Indianina (COI), araka ny tatitry ny delegasiona nihaona tamin’ny filoha Rajaonarimampianina, omaly teny Iavoloha. Niatrika izany ny solontena avy amin’ny Maorisy, Kaomoro, Seychelles ary i Madagasikara. Tanjona ny hikarakarana fifidianana milamina, hifanakalozana traikefa sy ny fanaraha-maso miaraka izany. Eo koa ny fametrahana foibe fanofanana […]
FMI – Fec 310 tapitrisa dolara : miankina amin’ny filankevi-pitantanana ny hahazoana izany
Nifarana, omaly, ny dian’ireo delagasiona avy amin’ny FMI, nanomboka ny 25 mey. Nijery ireo tetikasa azo anohanana ny fitondram-panjakana malagasy izy ireo hatramin’ny taona 2019 sy nifanakalo hevitra momba izany tamin’ny mpitondra. Hatramin’ny faran’ny volana jolay handinihan’ny filankevi-pitantanan’ny FMI izay haroson’i Madagasikara hahazoana io Fec io. Neken’ireo delegasiona avy amin’ny FMI notarihin’i Mills ny hahazoan’i […]
Nitory olona roa izay ben’ny Tanàna ny iray, ho nanao fandrahonana ho faty, ny lehilahy iray manana kilema tany Ambanja, ny 6 jona lasa teo. Tsy mbola vita anefa ny fanolorana ireo notorina ny fitsarana noho ilay ben’ny tanana toriny io mbola nivory tany Antsiranana. Tsy nanaiky izany ilay mpitory ka nanoratra tamin’ny taratasy A4 […]
Toamasina : tratran’ny polisy ireo jiolahy mpangalatra kaonteran’ny Jirama
Par Taratra sur 09/06/2016 Faits Divers, NS Malagasy
Noraisim-potsiny! Niampy roa indray ireo tambajotran-jiolahy mpangalatra kaonteran’ny Jirama voasambotry ny polisy tao Toamasina, afakomaly. Tsy vitan’izay fa misandoka ho mpiasan’ny Jirama koa ireto jiolahy ireto… Taorian’ny fitoriana napetraky ny orinasa Jirama no nahafahan’ny polisy nanenjika ireto jiolahy raindahiny amin’ny halatra kaontera ireto, araka ny tatitra avy amin’ny polisy. Voalaza fa tambajotra goavana mihitsy […]
Hetsika fanentanana : azo sorohina ny tranga fanaintainana
Azo sorohina amin’ny fihetsika samihafa eo amin’ny fiainana andavanandro ny fanaintainana miseho amin’ny vatana. Matetika anfagaron’ny olona ny fanaintainana sy ny aretina. Indraindray, fanairana ataon’ny vatana ny fisehoan’ny fanaintainana, ka tokony ho mailo hatrany izay hitrangan’izany. Iray amin’ny fisehoan’ny aretin’andoha ny fanaintainana antsoina hoe « migraine ». Tsapa fa ny zaza no matetika isehoany araka ny fizahana […]
Jly Rakotomahanina Florens : « Efa azonay ny anaran’ireo mikasa hanakorontana »
Miatrana ny Emmo/Far. Nampitandrina ireo mikasa ny hanakorontana amin’izao fetim-pirenena izao ny lehiben’ny CIRGN, ny Jly Rakotomahanina Florens. « Efa misy anarana azonay amin’ireo mihevitra ny hanakorontana, araka ny angom-baovao ka efa miomana hiatrika izany izahay ary handray andraikitra raha mitombina izany… Aoka tsy hanakorontana fa tsy maintsy ho tratranay ianareo… », hoy izy, tetsy Ankadilalana omaly. […]
Fitsaram-bahoaka tany Ampitatafika… : nodoran’ny olona, nasitrika tao anaty tanimbary ilay lehilahy
Par Taratra sur 09/06/2016 Faits Divers, La Une, NS Malagasy
Teo am-baravaran’ny tokatrano iray no tratran’ny fokonolona, tao amin’ny fokontany Ambonivary, kaominina ambanivohitra Ampitatafika, ity lehilahy iray saika hamaky trano ka niharan’ny fitsaram-bahoka. Rehefa avy nodarohana sy nodorana tamin’ny kitay, nasitriky ny olona tao anaty tanimbary ka maty sempotra tao. Leom-boanana! Tratran’ny fokonolona teo am-pikasana hamaky trano ny lehilahy iray tany Mahatazana Antanifotsy, ny alatsinainy […]
Rallye Dzama : hatao eto Antananarivo
Par Taratra sur 08/06/2016 Divers, NS Malagasy
Hiavaka ny dingana faharoa, amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara amin’ny rallye. Fihaonana izay karakarain’ny klioba Asacm. Tsy hotontosaina any Antsirabe araka izay efa voalaza mantsy ity, fihaonana ity, fa hatao eto Antananarivo. “Rallye Asacm indray andro”, ny anarana nampitondraina ny fifaninanana. Araka izany, ny asabotsy 18 jona tontolo andro ny hanaovana azy ity. Araka […]
« Précédent 1 … 1 080 1 081 1 082 1 083 1 084 … 1 216 Suivant »